जस्मिनसँग कसको बज्ला ‘पञ्चेबाजा’ ? (प्रोमो) « Ramailo छ
जस्मिनसँग कसको बज्ला ‘पञ्चेबाजा’ ? (प्रोमो)
प्रकाशित मिति : Jan 24, 2018
समय : 6:29 pm
फागुन ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ को प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । घनश्याम लामिछाने निर्देशित फिल्मको ट्रेलरमा अभिनेता सौगात मल्ल, कर्म, कलाकार बुद्धि तामांग, सृजना सुब्बा र जस्मिन श्रेष्ठ हाइलाइट्स छन् । प्रोमो हेर्नुस् :
प्रदीप भारद्वाजको स्क्रिप्ट रहेको ‘पञ्चेबाजा’ मा कालिप्रसाद बाँस्कोटा र विकास चौधरीको संगीत छ । सारा गुरुगं सह निर्माता तथा राजेश शाही फिल्मका निर्माता हुन् । हरी घले लामाको छायाँकन रहेको फिल्मलाई दिर्घ खड्काले सम्पादन गर्दैछन् । बुधबार गरिएको प्रोमो लञ्च कार्यक्रममा फिल्मका निर्माता, निर्देशक तथा कलाकार उपस्थित थिए ।